I-FAQ Yezihlungi Ze-TOFRE Herbal - Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu futhi ufuna ukuzama, ungashiya imininingwane yakho yokuxhumana bese uyithumela kithi ngekhasi elithi Thintana nathi, noma uxhumane nozakwethu bokusabalalisa basendaweni emhlabeni wonke ukuze uthenge.
Isisekelo Socwaningo Nokuthuthukiswa sochungechunge lwemikhiqizo ye-TOFRE konke kusekelwe ekhonweni eliqinile lelabhorethri yethu lokuqamba emisha yemithi.Inhloso yethu yasekuqaleni ukuhlanganisa ubuchwepheshe bemithi ekhishwe ezitshalweni zemvelo, nomuthi wamaphaphu ukuze sakhe indlela enempilo yokubhema kuzo zonke izinhlobo zababhemayo.
Izihlungi ze-TOFRE Herbal
1.Ihluke kanjani i-TOFRE kweminye imikhiqizo eqhathanisekayo?
Ihlukile kuzo zonke izihlungi zendabuko ezenziwe ngensimbi noma izinto zamakhemikhali emakethe, I-TOFRE Herbal Filter iyisihlungi sangempela&kuphela sikagwayi esinesakhiwo samakhambi ahlanzekile, esamukela ukwakheka kwe-capsule futhi wonke amafomula ahlangabezana nezindinganiso zebanga lokudla.
Ifomula yethu ehlukile yokuqamba amakhambi iyenza igcine u-100% ukunambitheka kwasekuqaleni kwentuthu, kuyilapho ingakwazi ukuhlunga itiyela, i-carbon monoxide nezinye izinto ezibangela umdlavuza entuthuni.Ngemva kokusebenzisa i-TOFRE, uzothola ukuthi ukubhema kuba bushelelezi futhi kuhlanzeke.
2.Iziphi izithako ze-TOFRE Herbal Filters?
Isakhiwo sokuhlunga asiqukethe izinto zokuhlunga zensimbi noma zamakhemikhali, futhi siyisakhiwo se-capsule yezinto zezitshalo.
Impahla yegobolondo yangaphandle: ipulasitiki yebanga lokudla
Okuqukethwe kwe-capsule: itiye polyphenols, theanine, Cordyceps sinensis, nano selenium tea powder
3.Ingabe i-TOFRE Herbal filter inganciphisa itiyela, insimbi enzima nezinye izinto eziyingozi?
I-TOFRE yenza isiqinisekiso esingu-100% sokuhlangenwe nakho okuphelele kokubhema ugwayi kuyilapho ihlunga itiyela nezinye izinto ezibangela umdlavuza, ukuze ababhemayo bathole okuhlangenwe nakho okuphelele kokubhema okwamanje bazuze umgomo onempilo nokunciphisa ukulimala.Kugwayi ngamunye, i-TOFRE ihluza izinto eziyingozi ezingama-67% nezingxenye zegesi eziyingozi ezingama-27.
4.Bangaki ogwayi ongasetshenziswa ngesihlungi esisodwa se-TOFRE Herbal?
I-TOFRE ingasetshenziselwa ugwayi ongu-20 ngokuqhubekayo, futhi isihlungi ngasinye singafakwa kalula esikhwameni sikagwayi ngemva kokuqaqa, esilungele ukuphatheka nokusetshenziswa nsuku zonke.
5.Ngingakwazi ukusebenzisa izinhlobo ezahlukene zikagwayi ku-TOFRE Herbal Filter?
I-TOFRE ifanele zonke izinhlobo zikagwayi: Okubi/Okuvamile/Okuncane
Isihlungi esi-1 sephakethe elingu-1 likagwayi
6.Uma usebenzisa i-TOFRE Herbal Filter, ingabe izothinta ukunambitheka kokubhema?